पृथ्वीनारायण शाह : नेपाल र नेपालीको गौरव | चितवन पोष्ट
पृथ्वीनारायण शाह : नेपाल र नेपालीको गौरव
राज्यको सिंहासनमा बस्ने राजा बहादुर, साहसिक, कूटनीतिक, चतुर, दूरदर्शी, सामाजिक, र्धािर्मक र राजनीतिकरुपमा पोख्त तथा अब्बल चरित्रको भएमा दुर्लभ मानिन्छ । त्यस्तै राजा पृथ्वीनारायण शाह राजा नरभूपाल शाह र रानी कौशल्यावतीका ज्येष्ठ सुपुत्र गोरखा राज्यका संस्थापक राजा द्रव्य शाहका सन्तति थिए । विसं १७७९ पौष २७ गते जन्मेका उनी शाह वंशीय इतिहासमा बडामहाराजाधिराजको हैसियत कायम गर्न सफल उनलाई अब मिथक मान्दा के होला ? यस्तो महान् सफलता हासिल गर्नमा अरु राजाभन्दा उनी निश्चितरुपमा युनिक र आश्चर्यजनक विशेषता र प्रतिभाले ओतप्रोत थिए । विसं १७९९ चैत्र २५ गते नरभूपाल शाहको मृत्युपछि पृथ्वीनारायण शाह गोरखाको राजा भए । उनी क्षमावान् राजा, कुसल शासक, नेतृत्वकारी गुणका नेता, वीर योद्धा, मह¤वाकांक्षी तथा दूरदर्शी र युद्धकलामा चतुर लडाकु थिए ।
सबै जातजाति, समुदाय र शत्रुको पनि सम्मान गर्ने गुणका हुन् पृथ्वीनारायण शाह । उनी समृद्घ, एकीकृत र अखण्ड नेपाल बनाउने महापुरूष नै हुन् । उनको योगदानले बाइसे, चौबिसे राज्यमा विभक्त टुक्रे राज्यहरु एउटै नेपाल बन्यो । एकीकृत, समृद्घ र अखण्ड नेपालको एउटै अभीष्ट उनको पूरा भयो । त्यसैले, नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहको त्यति नै योगदान छ जति अन्य देश एकीकरण गर्ने महारथीहरुको, जस्तोः ग्रिसका अलेक्जेन्डर महान्, रुसका पिटर, जर्मनीका बिस्मार्क, बेलायतका एगबर्ट, फ्रान्सका नेपोलियन, चीनका क्विन सेन ह्वाङ, अमेरिकाका जर्ज वासिङ्टन, जापानका ओडा नोबुन्एजा, टोकुगावा र इएसु, इटलीका क्यामिलो क्याभोर जिसेप ग्यारिबाल्डी ।
भारतलाई एकीकृत पार्ने भारतीय होइनन्, बेलायती उपनिवेशवादी साहेबहरु हुन् भन्दा अन्यथा मान्नु नपर्ला । आजका भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशलाई एउटै राज्य बनाउने बेलायती हुन्, भारतीय होइनन् । बेलायती साम्राज्य विस्तार गर्ने क्रममा इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतलाई उपनिवेश बनायो । उपनिवेशवादीले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सयौँ राजा–रजौटामा विभाजित भारतलाई एउटै उपनिवेश बनाएर शासन ग¥यो । त्यसैले, भारत एकीकरणको जस भारतीयलाई होइन बेलायतीलाई जान्छ । उनीहरुले नै इन्डिया नामकरण गर्दै एउटै भूभाग बनाएका हुन् । महात्मा गान्धीले त बेलायती उपनिवेशबाट भारतलाई मुक्त पारेका हुन् । भारत स्वतन्त्र हुँदा मोहमद जिन्नाले पाकिस्तान बनाएका हुन् ।
यस अर्थमा भारतलाई एकीकृत गर्ने सात समुद्रपारिका बेलायती हुन्, भरतीय होइनन् । तर, सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुँदा एकीकृत भारत पछि बंग्लादेश बनेर पाकिस्तानसहित तीन राज्यमा विखण्डित हुन पुग्यो । तर, पृथ्वीनारायण शाहले बेलायती उपनिवेशविरूद्घ उभिएर अखण्ड नेपाल बनाए । तर, भारतका पाँच सय ३६ राजाहरु आफ्नो देश जोगाउन नसकेर बेलायती उपनिवेशतिर फर्किए । नेपाल विश्वका दुई सय बढी देशहरुमध्ये चौबिसौँ पुरानो मुलुक हो, जो भारतभन्दा दुई सय वर्ष जेठो छ । यसको जस पृथ्वीनारायण र उनका सहयोगीहरुलाई जान्छ । त्यसैले, ती सबै महान् हुन् जसले समृद्घ, एकीकृत र अखण्ड नेपाल बनाए ।
तर, नेपाली कांग्रेस सात सालको क्रान्तिको घोषणा कार्यान्वयन गर्न राजा त्रिभुवनको आनाकानी र पछि राजा महेन्द्र प्रजातन्त्रविरोधी भएकाले राजा र उनका पुर्खाबारे कहिल्यै खुलेर बोल्न चाहेन । पृथ्वीनारायण शाहवंशको हुनुमा उनको दोष थिएन । कुरा उनी कुन वंशका थिए भन्ने भन्दा पनि उनले के गरे र उनको योगदान केकति थियो भन्ने अहम् पक्ष हो ।
पृथ्वीनारायणले जनतासँग मिलेर नेपाल एकीकरण गर्ने महाअभियानको नेतृत्वमात्र गरेनन्, त्यसलाई सफल पारेरै छोडे । उनी काठमाडौँ प्रवेश गर्दा उपत्यकामा क्रिश्चियनहरु बाइबल बोकेर आइसकेका थिए । भारतबाट पहिले मुसलमान र पछि क्रिश्चियनबाट लखेटिएका हिन्दुहरुलाई त्राण दिन पृथ्वीनारायण असली हिन्दुस्तान बनाउन लागेका थिए । नेपालबाट हट्नु परेको बदला क्रिश्चियनहरुले कति धार्नी नाक–कान काटेको दुष्प्रचारसहितको प्रोपोगान्डा गरे । तर, त्यति नाक काट्न कति जनसंख्या चाहिन्छ ?
पृथ्वीनारायणको निधनपछि कान्छा छोरा बहादुर शाहले मात्र बाबुको अभियानलाई निरन्तरता दिए । नेपाललाई पूर्वमा टिष्टादेखि पश्चिममा किल्ला काँगडासम्म पु¥याए । तर, दिव्योपदेशमा भनिएझैँ उनका सन्तानले गर्न सकेनन् । पृथ्वीनारायणले भनेका थिए, अंग्रेज बडा चतुरो जाति हो । लडाइँ, झगडा नगरी छलकपटहरु गरेर भए पनि हाम्रो देशमा आउन सक्तछ ।
नभन्दै नेपालसँग लडाइँमा नसकेपछि अंग्रेजले नेपाली दरबार, जो सत्ताको हालीमुहाली गरेर बसेको थियो त्यसैमा झगडाको बीउ रोपेर मलजल गरेको नेपाली शासकले पत्तै पाउन सकेनन् । शाह राजाहरु मोजमस्ती, पारिवारिक कलहबाट कहिल्यै बाहिर निस्कन नसक्ने गरी फसे । भारतमा झन्झन् पकड जमाइरहेका बेलायतीहरुले मजासँग खेले, यो अर्कै पाटो हो । पृथ्वीनारायण शाहलाई चार आयामबाट हे¥यो भने छर्लंग हुनसक्छ । पहिलो, नेपाल एकीकरणकालका पृथ्वीनारायण । दोस्रो, जहानियाँ राणाकालका पृथ्वीनारायण । तेस्रो, पञ्चायतकालका पृथ्वीनारायण र चौँथो, लोक गणतन्त्रका पृथ्वीनारायण । एकीकरणकालका पृथ्वीनारायणले सिंगो मुलुकको परिचय दिए । नेपालीलाई नेपाली पहिचान दिने उनै हुन् । उनले नेपाल एकीकरण गरे । नेपाली राष्ट्रियताको जगेर्ना गरे । नेपाल राष्ट्र निर्माण गरे ।
राणाकालीन नेपाली शासकले विदेशीसँग सम्झौता गरेर निमुखा नेपाली जनतालाई शासन गरेर बसे । राणाहरुले पृथ्वीनारायणको संकेतका रुपमा उनका सन्तानहरुलाई खोपीमा राखेर आफूले शासन गरे । उनीहरुले के भ्रम दिन खोजे भने अगाडिको पुस्ताको गुण पछिल्लो सन्तानले बोकेको हुन्छ, तर सत्य सावित के भएको छ भने पहिलो पुस्ताको गुण दोस्रो पुस्तामै आउँदैन । सन्तानमा गुण आउने होइन, संस्कार आउने हो । राजसंस्कारविहीन राजाहरुमा के गुण हुन्थ्यो र आउनु ? फलस्वरुप, राजाहरु मोजमस्तीमै झुलिरहे । राणाहरुले जहानियाँ शासनलाई टिकाइरहे । पृथ्वीनारायणको पुस्तालाई वैदिक विधिअनुकूल हुने गरी बिरालो बाँधेर एक सय चार वर्षसम्म शासन गरे ।
तेस्रो खण्डमा पृथ्वीनारायणको विरासतलाई राजा महेन्द्रले पारिवारिक सम्पत्ति र शासनको उत्तराधिकार प्राप्तिका लागि दुरूपयोग गरे । नेपाल एकीकरण गर्ने सुधारका रुपमा पृथ्वीनारायणले आर्जन गरेको ख्यातिलाई पञ्चायती शाहहरुले महादुरूपयोग गरेर जनताको विरासतमा होइन, पृथ्वीनारायणजस्ता महापुरूषलाई शाहमा खुम्च्याएर ब्रह्मलुट गरे । निहित स्वार्थपूर्ति गर्न चरम दुरूपयोग गरे । हाम्रा पुर्खा पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको मुलुक हो भनेर नेपाललाई नै पैतृक अंशको रुपमा लिए । जनताका नायकलाई जनताको दुश्मनको कित्तामा उभ्याएकाले शाहवंश नै सकियो । तर, पृथ्वी महिमा उजागर हँुदैछ ।
चौँथो चरणको बहुदलीय प्रजातन्त्रकालका शासकहरु झुन्डझुन्डमा विभक्त भएर पृथ्वीनारायणप्रति भिन्न दृष्टिकोण राखे । भिन्न विचार, सिद्घान्त र दर्शनले आआफ्नै कोणले सामन्त, महासामन्त र अधिनायकवादी भनेर हेरे, तर लोक गणतान्त्रिककालमा त्यो पटाक्षेप भएको छ । पृथ्वीनारायणका सालिक ढाल्नेहरु पनि अहिले झस्किएका छन् । सामन्त, महासामन्त र अधिनायकवादी भन्नेहरु पनि चकमन्नको अवस्थामा छन् । भन्न थालिएको छ, राष्ट्रिय एकता त चाहिने रहेछ । आखिर नेपाललाई कसले एकीकरण ग¥यो त ? यो त नभई नहुने पो रहेछ । एकीकरण गर्ने को हो ? कसको अभियान थियो यो ? बाइसे, चौबिसे राज्यहरु रहेका भए के सिंगो नेपाल रहन्थ्यो ?
कांग्रेस, कम्युनिस्टहरु विभिन्न विचार र सिद्घान्तबाट अभिप्रेरित छन् । उनीहरुले आआफ्नै कोण र स्कुल अफ थटबाट राजतन्त्रलाई सामन्त, अधिनायकवादी, पछौटे, अप्रजातान्त्रिक शक्तिकेन्द्रका रुपमा हेरेका र भोगेका थिए । राजा वीरेन्द्रको वंश विनास र राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्रको पटाक्षेपपछि झस्किने पालो पृथ्वीनारायणको सालिक ढाल्नेहरुको आयो ।
नेपाल एकीकरणपश्चात् मात्र परिचित भएको हो विश्वसामु । साना–साना राज्य र रजौटाहरुमा विभाजित देशलाई राष्ट्रिय एकताको एउटै मालामा उन्ने अभियानका नायक त पृथ्वीनारायण पो रहेछन् । बाइसे, चौबिसे राज्यका टुक्रेटाक्रेहरुलाई एकत्रित गरेर एउटै नेपाली मालामा उन्ने कोही थियो भने त्यो नायक पृथ्वीनारायण नै थिए भन्न थाले । कांग्रेस, कम्युनिस्टहरु अझै अलमलमै छन् । पृथ्वीनारायणलाई हामीले बोक्दा निरंकुश राजा र तिनको निर्दलीय शासनकालका कुकर्महरुको भारी पनि व्योहोर्नुपर्छ कि भन्ने डरत्रास छ, किनभने पञ्चायतकालभरि राजाले प्रजातन्त्रको हत्या, निर्वाचित सरकार अपदस्थ र सैनिक कु का बलमा एकदलीय शासन लादेर ब्रह्मलुट गरे ।
पृथ्वीनारायणको इतिहास साक्षी छ, उनमा एक्लो निरंकुश राजाभन्दा जनताको राजा हुने इच्छा रहेको देखिन्छ । उनी विराज बखतीलाई काजी बनाउन चाहन्थे, तर जनताको चाहना कालु पाँडेलाई बनाउनुपर्छ भन्ने रहेछ । तर, मण्डले राष्ट्रवादको र निरंकुश, सामन्त राजाका जिजुबराजु भएकाले उनी छायामा पर्नु परेको छ । तर पनि पृथ्वीनारायण देशका वास्तविक नायक हुन् । सबै नेपालीको पहिचान यिनैले दिएकाले यिनले सम्पूर्ण नेपालीको आदर र सम्मान पाउनुपर्छ ।
नेपाल स्वतन्त्र, सार्वभौम र अखण्ड राष्ट्र भएपछि मात्र राष्ट्रिय एकता सम्भव भएको हुनाले राष्ट्रिय एकता दिवस, संविधान र गणतन्त्र दिवसजस्तै मह¤वपूर्ण छ । पृथ्वीनारायणले हामीलाई दिएको पहिचानका आधारमा सार्वभौम, अखण्ड, स्वतन्त्र र एकीकृत राष्ट्र नेपाल बनाएका अभियन्ता र महानायकको हैसियतका कारण उनलाई मिथकीयरुपमा स्थापित मान्ने हो कि ?